Nzọụkwụ Nzọụkwụ Mbara Igwe Mbara Igwe-Ọmụmụ 1 Na-ere onntanetị
Usoro nkuzi ume, Mbara Igwe nke Anyanwụ, Ọmụmụ ikuku, Renewable Energy
Thekwụ bykwụ na larkwụ Solar n'ịntanetị bụ ọnụ ọgụgụ otu na-ere akwụkwọ ịntanetị na ụmụ akwụkwọ were ụgwọ karịrị nde 120. A na-eme ka ọzụzụ nkuzi niile dị mfe, na-aga n'ihu ma na-adị irè. Usoro nkuzi ahụ na-enye vidiyo ihe atụ nke ụwa n'ezie nke nrụnye nke anwụ cha cha nke doro anya ma bido ịmalite iji hụ na ọ nweghị nzọpụ. Ebumnuche maka ọkwa 1 nke usoro 3 anyị bụ naanị iji hụ na ụmụ akwụkwọ ga-enwe ike iji obi ike İnstall Solar Panel Sistemụ na-arụ ụlọ obibi. Enweghi ahụmịhe nke anyanwụ dị mkpa iji mee ihe ọmụmụ a, ọ nweghị ihe ọmụma ọrụ aka ọ chọrọ mana ụmụ akwụkwọ ga-enwerịrị ike ịgbaso usoro dị mfe ma doo anya na ịwụnye usoro panel nke sistemụ. Edebere ihe ahụ ma ya na onye mbido. Mụta otu esi eji obi ike wụnye usoro mbara igwe site na mbido ruo n'isi. Ọnọdụ ndị ọzọ nke mmụta a gụnyere extra.al vidiyo, ajụjụ dị iche iche, ihe ndị ọzọ na-akwado pdf, ihe ngosi ppt, na ihe ngosi njikwa anyanwụ nke Kimroy & Sherika Bailey gosipụtara n'onwe ha. A na-enye ụmụ akwụkwọ ohere afọ 1 n'efu n'efu na ngwa niile nke usoro ahụ yana mmelite ọhụụ ọ bụla n'ime afọ
SKU: KB-OC-005 Categories: Renewable Energy, Usoro nkuzi ume, Mbara Igwe nke Anyanwụ, Ọmụmụ ikuku Tag: Larkwụ na larkwụ Solar
Tab ndị Ahịa
Thekwụ na Soro zụlitere Kimroy Bailey Group na mmekorita ya na ndị a Mahadum Trott Bailey ịkụziri ndị mmadụ otu esi eji obi ike wụnye sistemụ ike anyanwụ. Onlinelọ akwụkwọ ntanetị anyị bụ ọkọlọtọ nke ụlọ ọrụ ahụ wee nwee nkwado karịa 126 nde ndị na-enye anwụrụ ọkụ sitere na mba 118 dị iche iche. Kwụ na larkwụ Solar kwadoro site na Mahadum Trott Bailey, nke na-enye ndị ntinye anyanwụ na ahụmịhe mmụta dị n'ịntanetị. Mahadum Trott Bailey asughariala ihe akwukwo obula ma mee ugbua ihe omumu a kariri asusu 75 di iche iche!
Mụta otu esi eji obi ike wụnye usoro anwụ anwụ zuru oke na Stepkwụ na bykwụ site na Nzọụkwụ Ọkụ Solar. Installationme nwụnye nke mbụ nwere ike bụrụ ihe na-eyi egwu, ka anyị nyere gị aka wepu usoro a site na iji nkuzi a na-ahụ anya. Ndị otu nkwado ndị ahịa anyị bịara ebe a iji zaa ajụjụ gị, pịa ebe a ka ị gwa otu onye ọrụ anyị okwu ugbu a!
Nke ahụ pụtara site na mkparịta ụka mbụ gị na onye ahịa gị mbụ, nyocha nke mbu nke anyanwụ, na-ewepụta atụmatụ anyanwụ gị, ịwụnye ebe nchekwa anyanwụ mbụ, batrị, njikwa ụgwọ, inverter ma na-eme ka ụlọ ahịa gị dị ike. Ihe ọmụmụ a jiri vidiyo vidiyo nke ọtụtụ nrụnye ụlọ ụlọ dị elu nke ndị ọkachamara rụpụtara. Anyị ga-ejide aka gị iji hụ na ị rụchara ọrụ ọfụma, chịkọta ụgwọ ịkwụ ụgwọ gị, wee nweta nnukwu ụgwọ ọrụ na ntinye sistemụ igwe.
Kwụpụ Site Stepkwụ na Sokwụ Anyanwụ N'ezie ọdịiche-grid na okporo-tie anyanwụ nrụnye. Anyị na-akwado ka ụmụ akwụkwọ jiri nke anyị Jụọ Pro ọrụ maka ajụjụ ndị ọzọ. Enwere ike itinye ajụjụ site na ikpo okwu nkata anyị n'ịntanetị. Pịa ebe a iji gwa otu n'ime ahịa anyị ugbu a.
Productdị ngwaahịa ọ bụla ịchọrọ - Dị Mfe, Configurable
Ngwa nbudata / Ngwaahịa Dijitalụ, Ngwaahịa Virtual
Ihe Ndepụta Ngwaahịa ya na ihe azụ
Isi nke Nzọụkwụ Site na Nzọụkwụ Mbara Igwe
Nzọụkwụ site na Nzọụkwụ Mbara Igwe Mbara Igwe dị mma maka ndị mmadụ n'otu n'otu, ndị ọkachamara anyanwụ, ndị na-agba oche, ndị ọrụ ngo, ndị agha, na onye ọ bụla na-achọ mgbanwe ọrụ. Ọ bụrụ na ịmasị gị na ọzụzụ nke nwere ike ịkwadebe gị maka ịbanye na Solar Industry, nke a bụ usoro maka gị.
Stepkwụ na Bykwụ Solar Solar bụkwa nnukwu ihe nkwado maka kọleji iji. N'ihi ya Nzọụkwụ Mbara Igwe Mbara Igwe enwere ike iji mee ka usoro echiche siri ike dabere, usoro ọmụmụ kọleji. Usoro anyị bụ ọrụ aka karịa, n'ọhịa, usoro izizi akụkọ ndụ n'ezie nke onye mbido ọ bụla ma ọ bụ ọkachamara nke anyanwụ ga-enwe ekele maka ya.
Ntọala nke azụmahịa ntinye nke anyanwụ
Courselọ akwụkwọ a abanye n'akụkụ aka azụmaahịa nke ịgbado azụmaahịa ntinye nke anyanwụ. N'ihi ya ị ga-enweta vidiyo nke Kimroy & Sherika na-atụle nsogbu ndị dị ka:
Mmepe nke ndị ọrụ,
Nkwadebe ụbọchị nkwadebe,
Ndị ahịa na-azụ ahịa
Akụkụ uru uru maka azụmahịa nrụnye anwụ.
Bido mmụta taa. Bianu, egbula oge. Otu nwoke maara ihe kwuru, Ọ bụrụ na ị na-echere ka ụbọchị ihu igwe zuru oke ka ọ pụta, ị gaghị aghọrọ ihe ubi. ” N'otu aka ahụ, echela ụzọ ahụ zuru oke, oge zuru oke, ọnọdụ ọrụ zuru oke, ma ọ bụ itinye ndụ gị ịmalite taa. May nwere ike ịfufu nnukwu ohere ị na-abịa n’ime ụlọ ọrụ ike ịmegharị mmegharị.
1 nyochaa maka Larkwụ na larkwụ Solar
Egwu di egwu
Ọdịnaya Tab Tab